Idebe ulo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: Nyocha ụlọ
Kedu ka esi gbakọọ mita maka ego ole ị ga-akwụ maka gas? Ọ bụ 6.492, ugbu a 7.777.
Kedu ka esi gbakọọ mita maka ego ole ị ga-akwụ maka gas? Ọ bụ 6.492, ugbu a 7.777. Maka nọmba gas mgbe njirimara adịghị agụta, ị ga-enweta otu cube (7-6), nke ahụ bụ ...
Kedu esi dee mkpesa ma nyefee akpụkpọ ụkwụ dị njọ?
Otu esi ede nkwupụta ma gafere akpụkpọ ụkwụ dị ala? Na saịtị Riskover ru na "omume n'ọnọdụ ọnọdụ", ịnwere ike iwepụta ederede mkpesa nye onye na - ere ngwongwo na-adịghị mma na ederede nkwupụta ...
Gụọ ọgụgụ nke ọnụahịa abụọ
Gụọ ọnụọgụ abụọ nke ọnụahịa tarifụ. Ọ bụ ngwá ọrụ nke oge a maka iwepụ ọkụ eletrik. Achọpụta njirimara nwere ike kpebisie ike na, dị ka ụkpụrụ ya si arụ ọrụ, ndị ọkụ eletrik na-akwụ ụgwọ eletrik mgbe ha na-aza ajụjụ maka mmadụ abụọ ...
Ndewo! !! Gwa m pliz! Ego ole ka akwụ ụgwọ ụmụaka ugbu a? Nwa 2 afọ !! !! Nụrụ ihe ahụ! Ọ bụ 750
Ndewo! !! Gwa m pliz! Ego ole ka akwụ ụgwọ ụmụaka ugbu a? Nwa 2 afọ !! !! Nụrụ ihe ahụ! Enwere igwe di iche iche nke 750 maka Moscow na Moscow, mana m nuru na Moscow adighi nma ...
Rostelecom nyere ọnụahịa ahụ n'ejighị ego ọ bụla
Rostelecom nyere tariri na-akwụghị ụgwọ kwa ọnwa; anụbeghị m banyere nke a. Guo maka ugwo na oru na weebụsaịtị ROSTELECOM n'onwe ya. Atụmatụ ụgwọ tarifu "Home 2015". A naghị echekwa ụgwọ maka akara ndị debanyere aha ...
Kedu otu esi amalite ahia ahia gi n'ulo?
Kedu otu esi amalite ahia ahia gi n'ulo? Malite site na ịnakwere iwu maka ịme efere maka ememe n'usoro. Iji malite, ị nwere ike ịga ọtụtụ forums na ...
Ònye nwere mita abụọ maka ọkụ eletrik, gwa m, olee mgbe abalị ga-amalite? Kedu mgbe a ga-agbanye efere efere?
Onye nwere mita eletriki okpukpu abụọ, gwa m, olee mgbe abalị ga-amalite? Kedu mgbe ị ga-etinye igwe eji esi nri? Ana m atụgharị ya mgbe elekere 22:00 mana oge abalị sitere na 23-00 ruo 7-00 !!! site na 23h…
Mgba eletrik nke atọ
Ntọala tarifọ atọ ahụ bara uru site na afọ 2006. Nke a bụ 11 afọ. Multirate ajụjụ iji tarifu ọdịiche dị na oge zones n'abalị (23-00 ka 07-00) elu (na 07-00 ka 10-00 ...
Na ọhụrụ kwụsịrị. na mgbazinye ego ole na ole na-enweghị nghọta - HVS na ONYE, GVS na otu na ìhè kwa. Na na graph-normative. Ònye maara?
Na nnata ọhụụ. na ụgwọ ụlọ ole na ole edoghị anya-HVS na ONE, GVS on ONE and light too. Dị ka kọlụm na-agbanwe agbanwe. Onye ma ọkọlọtọ - nke mere na ha ga-ama mgbe ọnụọgụgụ ahụ ga-akwụsị oge nyocha ...
esi zọpụta mmiri n'ụlọ?
esi zọpụta mmiri n'ụlọ? BỤRỤ njikọ njikọta mmiri na-egbochi site na mkpebi nke nchịkwa nchịkwa Ọ bụrụ na enweghị ọnụ, ọ bụ ihe efu. Site na njiri elu, ojiji karia oyi, n'ihi na odi oke ala. Banyere ịsa ahụ gị ...
kedu ụlọ ahịa ahịa kachasị ọnụ ala na Moscow?
kedu ihe ịzụ ahịa ụlọ ahịa dị ntakịrị na Moscow penny na pyaterochka .... dozie ọnụ ahịa ebe niile maka 35 rubles! ọbụna caviar na-acha ọbara ọbara na ojii - ọ bụghị ezigbo) na ụlọ mega ọcha ...
Achọrọ m ịme akwụkwọ nke ngwongwo ezinụlọ. Ihe akwụkwọ dị mkpa maka nke a?
Etosiri m itinye akwụkwọ nke mebere ezinụlọ. Kedu akwụkwọ ndị achọrọ maka nke a? Akwụkwọ ụlọ, paspọtụ ma ọ bụ asambodo ọmụmụ, ọ bụrụ na akwụkwọ nke aka ya ga - achọ akwụkwọ maka ụlọ ... na-enye onye njem njem ...
Echefuru m koodu PIN nke kaadị Bank Savings! Kedu ihe m kwesịrị ime?
Echefuru m koodu PIN nke kaadị Bank Savings! Kedu ihe m kwesịrị ime? Kemgbe 2013, SB na-enyefe kaadị na-enweghị koodu PIN arụnyere. Ị debere onwe gị, ya bụ, enwere ike ịnweghị envelopu. weghachite nọmba PIN, ...
Kedu ụdị nke LMS XL XXL na aha ndị ọzọ na-ede?
Gini kedu ka LMS XL XXL na ihe okike ndi ozo dakọtara? odika ọ dị ka nke a xs42, s44, m46, l48, xl50, xxl52 ... Ihe ndị a na-ahụkarị ụdị akwa jeans bụ European. Na akara ...
kedu esi agba mita mita ahụ n'ụzọ ziri ezi? na ha nke ise ise dị oji, ndị nke ikpeazụ ga-acha uhie uhie
kedu esi agba mita mita ahụ n'ụzọ ziri ezi? na ha na nke mbụ na ọnụ ọgụgụ ise bụ nwa, ndị ikpeazụ na-acha ọbara ọbara Zdrastvujte! Gwa m otu esi eti mpempe akwụkwọ site na counter na 5-black numbers.
Kedu ka esi chọpụta ụgwọ maka ọkụ eletrik?
Kedu ka esi chọpụta ụgwọ maka ọkụ eletrik? A na-ede akwụkwọ mgbe niile. N'ebe ahụ. Envelopu na akwụkwọ ọhụrụ na-eziga. Na Moscow, ógbè ọ bụla nwere nọmba nke aka ya. Na envelopes ha dere. Ma ọ bụ 09 oku. ma ...
Kedu akwụkwọ dị mkpa iji nweta akwụkwọ amụrụ ... Akwụkwọ amịghị ọmụmụ.
Kedu akwụkwọ ndị a chọrọ iji nweta akwụkwọ amụrụ ... Akwụkwọ amama ọmụmụ. Onye akaebe bụ na ??? akwụkwọ ikike si n'ụlọ ọgwụ, akwụkwọ ikike ndị nnabata na akwụkwọ ịgba alụmdi na nwunye site n'ụlọ nne, paspọtụ mama-papa, na ...
esi gụọ ọgụgụ mita maka mmiri. kọọrọ m otu esi atụkọta mmiri mmiri iji kwụọ ụgwọ ihe niile n'ụzọ ziri ezi
esi gụọ ọgụgụ mita maka mmiri. kọọ otu esi agakọba mmiri nke mmiri iji kwụọ ụgwọ ihe ọ bụla n'ụzọ ziri ezi. 1000 lita -1 cubic mita. Dị ka ihe atụ, echere m nke a: M dee ...